भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध जायज - Khabarshala भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध जायज - Khabarshala
भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध जायज
नेपाली केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भारतीय न्यूज च्यानल बन्द गर्नु तत्कालका लागि एकदमै राम्रो कदम हो। यसमा कुनै प्रश्न नै उठाउन मिल्दैन। तत्कालका लागि यसको अर्को विकल्प पनि थिएन।
भारत सरकार वा भारतीय अधिकारी र नेपाली अधिकारीबाट यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुगेपछि भने यसले अर्थ राख्दैन। त्यतिञ्जेल सम्मका लागि यसको विकल्प थिएन।
प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कुनै पनि देश तथा देशका कार्यकारी प्रमुखको वेइज्जत गर्न कुनै पनि कानूनले दिँदैन। त्यसमा झन् विदेशी च्यानलले यस्तो गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै अपमान गर्नु हो।
भारतीय मिडियाले अतिरञ्जित समाचार सम्प्रेषण गरेर नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत गर्दै आएका छन्। यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि तत्काल अर्को उपाय पनि थिएन। अब सरकारले चाँडै अर्को कदम चाल्नुपर्छ। भारतीय अधिकारीसँग कुरा गर्नुपर्छ, नेपाली विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तयारी गर्नु पर्छ।
हुन त टेलिभिजन मिडियालाई बन्देज लगाएर त केही हुँदैन। टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्ने समाचार सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब मार्फत आइरहेकै छन्। यसरी बन्द गराउँदा उनीहरूलाई नैतिक दवाव भने अवश्य पर्छ।
अहिलेको नेपालको कदम भनेको भारतीय मिडियालाई सन्देश मात्र हो। यसरी बन्द गरेर हुने त केही होइन तर, सांकेतिक रूपमा बलियो सन्देश भने पक्कै हो।
राज्यस्तरबाटै यो कदम चालिँदा अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर सरकार यहि मौकामा तत्काल समाधानको बाटोतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि विज्ञ समिति बनाएर महिनौं लगाउने होइन कि तत्कालै ठोस कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ।
भारत सरकार रिसाउँछ कि भनेर ठोस कदम चाल्न हिचकिचाउनु हुँदैन। हाम्रो हितमा नभएका तथा देशकै बेइज्जत हुने गरी आउने सामाग्रीहरूलाई हामीले किन सुन्ने र हेर्ने भनेर मनन् गर्नु जरूरी हुन्छ। सरकारले यही स्पिरिटअनुसार भारतलाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
अहिले जनमानसबाट पनि सरकारले राम्रो साथ पाएको छ। यहिबेला सरकारले ठोस कदम चाल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। भारतका सबै न्यूज च्यानल नै बन्द गराउने कि अफवाह फैलाउने खालकालाई मात्र बन्द गराउने भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस इन्स्टिच्यूट लगायतका संस्था मार्फत पनि यसबारे काम गर्न सक्छौं। त्यति गर्दा पनि भएन भने अन्य उपाय हुन सक्छन्। जे-जे उपाए हुन सक्छन् ती सबै अपनाउनुपर्छ।
नेपालका पक्षबाट चालिएको सुरुआती कदम राम्रो छ। यो कदमले नै उनीहरू सच्चिन्छन् की भनेर हेर्न पनि सकिन्छ। सच्चिएनन् भने अर्को कदम चाल्नुपर्छ।
अबको बाटोः सुरक्षा तयारी सहित विद्यालय संचालन
काे अल्पसंख्यक ? किन उनीहरु माथि दमन ?
कोरोना अनुकुलता, अबको आवश्यकता
शिक्षामा कोभिडले सिर्जना गरेको अवसर
युवा व्यवसायी श्रेष्ठको अल्पायुमै मृत्यु
तुलसीपुरमा समुदायस्तरमा कोरोना नेगेटिभ
तुलसीपुरमा समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षण सुरु
सावधानी अपनाऔं, भयावह अवस्था आउन सक्छ: नगरप्रमुख पाण्डे
अब लकडाउनकाे निर्णय स्थानीय तहले गर्ने